No Rest for the Wicked (Supernatural) - Wikipedia, Njikotá édémédé nke onyobulạ
Ndị ǹjèǹje nà okàta â ndị ndeụta jàrà màkà ịhe òmùme ha, Ackles (aka èkpè) nà Padalecki (aka nri) màkà njeonye Dean nà Sam Winchester.
"No Rest for the Wicked" ('ndị ọjọọ̀ enweghị̀ ǹzùike') bụ̀ àgbà àtọ mbìbì ǹkè osòga ntenyo The CW bụrụ Supernatural. Ọ bụ̀ àgbà ìrinàìsii of the third season, and is the show's sixtieth episode overall. Eric Kripke onye kere osòga â dèrè ya nà Kim Manners dìrì ya, okàta â bìdò nzìzìrì nà 15 Ọnwaìse 2008. Akụkọ nọ̀ na è so ndị the series' protagonists ǹke àgbà bụrụ Sam (Jared Padalecki) nà Dean Winchester (Jensen Ackles)—ha bụ̀ nwanne pụrụ ijè garia Njikọ̀taọ̀hà na à chụ mmụọ—m̀gbè ha chọ̀rị zọpụ̀ta mmụọ nà ọkụmmụọ. Ha meela gba àgbà mmụọ ọjọ màkà afọ̀ nà mbìbì àgbà ǹkè ìkpeàzụ, Dean e me ị nwe naanị otù mkpụrụ ụbọ̀chì nà ndụ̀. Ndi nwanne gị chụtu isi ndị mmụọ ọjọ bụrụ Lilith, onye ji àgbà Dean. Lilith, nà ogè â, nọ̀zi na'à rọfụ̀ nà onwe ya siri ị ba mmụọ nwa àgbọghọ̀ (Sierra McCormick) nà ị ghara ikwu ya, nà ǹhùụja màkà okàta Twilight Zone bụrụ "It's a Good Life" ('ọ bụ̀ ndụ̀ ọma').
Ǹkè âbụrụ ìkpeàzụ a g'ị hụ Katie Cassidy kà mmụọ ọjọ Ruby, okàta â dị nà m̀bụ ị lọàchita Samantha Ferris kà njeonye n'à bia kwam̀gbèm̀ bụrụ Ellen Harvelle. Ndị òdìde nà m̀bụ chọ̀rọ̀ kà Sam zọ̀rọ Dean si nà ị gakwute òmùme mmụọọjọ ya, mànà nà esi ndị òtù òdìde Writers Guild of America nà 2007–2008 sìrì gbòchìrì ịhẹ mmepụ̀ta ịhe akụkọ ahụ̀ nà okàta ahụ̀. Dean bụ̀ onye dịzị mbụ nwụ̀ọ; umeǹgà ǹke ngwụbìe m̀gbè ọ nọ̀ nà ọkụmmụọ bụ "most complicated shot [the] visual effects department has ever done".
Okàta gòtàrà ujara ukwuukwu màkà àgbà ahụ̀, nà o wètàrà ndetara siri ndị ndereụta ǹkè ọma. Mkpezù ǹke ị mewezie ḿbé Dean's ǹsoro ga ọkụ mmụọ wèràrà ha ụjaike, mà màkà umere njenje Padalecki nà Ackles. Ọ̀hà kwèrè nà McCormick dị "mgbaraákpàtàoyi" nà Lilith, mànà ò nweghị̀ ike njènje ujụjọ ǹkè redric Lehne mètàrà nà ǹjèǹje Azazel ǹke àgbà abụọ gara.
Ewepụtara na https://ig.wikipedia.org/w/index.php?title=No_Rest_for_the_Wicked_(Supernatural)&oldid=68483
Oge ikpeazu Edeziri ihuakwụkwọ a bụ 5 Ọnwa anọ 2021, mgbe 21:17